विराटचाेकमा टिभिएसकाे तिन पाङ्ग्रे अटाे शाेरुमकाे शुभारम्भ, ग्राहकलाई २५ लाखको आकस्मीक तथा ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य विमा - Purbeli News
विराटचाेकमा टिभिएसकाे तिन पाङ्ग्रे अटाे शाेरुमकाे शुभारम्भ, ग्राहकलाई २५ लाखको आकस्मीक तथा ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य विमा
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण १८, २०७५ समय: ८:२८:५७
सुन्दरहरैंचा / माेरङकाे सुन्दरहरैचा बुधबारेमा कन्काई इन्टरप्राइजेज टि.भि.एस शाेरुम बिराटचोकको आधिकारीक विक्री तथा सर्भिस केन्द्रको शुभारम्भ भएकाे छ । एक कार्यक्रमका बिच कोसीहरैंचा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज चापागाईले शाेरुमको उद्घघाटन गरेका हुन् । उद्घघाटन समाराेहमा चापागाईले पुर्वमै उदाउंदै गरेको शहर विराटचोकमा कन्काई इन्टरप्राइजेज टि.भि.एस्. सोरुम संचालनमा आउंदा युवालाई बैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा तिन पाङ्ग्रे अटाे किनेर स्वदेशमै व्यवसाय गरी आम्दानी गरेर विदेशीने लाखौं रुपैया नेपालमै चलायमान गराउनुपर्ने बताए । उनले कम्पनीले ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिन सक्नु नै सोरुमको सफलता भएकोले उच्च मनोबलका साथ ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
टि.भि.एस् कम्पनीले बजारमा टि.भि.एस्. किङ डिलक्स ब्राण्डका तीन पाङ्ग्रे अटाे गाडी ल्याएकोले उदघाटकाे अवसर संगै केहि दिनका लागि अटाे गाडी खरिद गर्ने ग्राहकलाई २४ इन्चको एल.इ.डि. टि.भी उपहार स्वरुप प्रदान गर्ने अटाे सोरुमका संचालक चन्द्रमणी दाहालले जानकारी दिए ।
उत्कृष्ट माइलेज तथा तानशक्त्ती साथै अाधुनिक र सुविधा सम्पन्न भएको गाडी बजारमा ल्याइएको टि.भि.एस सेल्स मेनेजर सागर घिमिरेले जानकारी दिए । उनले कम्पनीले गाडी खरिदगर्ने ग्राहकलाई २५ लाखको आकस्मीक बिमा तथा ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमाको सुविधा रहेको बताए । खरिद गरिएका गाडीकाे एक वर्षको वारेन्टी समेत रहेको सर्भिस मेनेजर पुरुषोत्तम अधिकारीले जानकारी दिए ।